Expanded Pure PTFE Yesigcilikisha Intambo Tape - China Yangzhong Luck Star ukubekwa uphawu
Expanded Pure PTFE Yesigcilikisha Intambo Tape
IElectromagnetic diaphragm nokushintsha kokudla nokufakwa Pumps Seal
PTFE yemvilophi CNAF Lapjoint flange Gasket
Bushing Ukunikeza Taper Lock
Camshaft Ukuphela Izingxenye
OEM Graphite Egcwele PTFE Ring
Ayikho-imbobo PTFE yemvilophi CNAF Gasket
Incazelo: 1.Expanded PTFE sealant ngokuhlanganyela tape kuyinto multi-purpose gasket itheyiphu ekhiqizwa kusuka 100% PTFE enwetshiwe fluorocarbon impahla. 2.It enikeziwe njengoba okuqhubekayo ongaphakeme ukuminyana tape nge Esekelwa strip self-Yesigcilikisha. 3.It ethambile sithambile, zokukuvumela ukuze kuvumelane kalula kubo bonke semfene surface futhi cindezela ukuze umdweshu mncane uma ngingaphansi kokucindezeleka. Isicelo: Expanded PTFE sealant ngokuhlanganyela itheyiphu Kunconywa njengoba tape gasket e steel, ingilazi-ngaphakathi, PVC ne-fiberglass ipayipi Flanges, fume ...
1.Expanded PTFE sealant ngokuhlanganyela tape kuyinto multi-purpose gasket itheyiphu ekhiqizwa kusuka 100% PTFE enwetshiwe fluorocarbon impahla.
2.It enikeziwe njengoba okuqhubekayo ongaphakeme ukuminyana tape nge Esekelwa strip self-Yesigcilikisha.
3.It ethambile sithambile, zokukuvumela ukuze kuvumelane kalula kubo bonke semfene surface futhi cindezela ukuze umdweshu mncane uma ngingaphansi kokucindezeleka.
PTFE Expanded sealant ngokuhlanganyela itheyiphu Kunconywa njengoba tape gasket e steel, ingilazi-ngaphakathi, PVC ne-fiberglass ipayipi Flanges, fume Amapayipi, zamabhodlela ukhonkolo, ukushisa, izitsha plastic fibre ingilazi kwagcizelela, Flanges futha izindlu, umusi isitsha Flanges, mgodi futhi mgodi ihlanganisa, amalunga Ceramic, ukupholisa Amapayipi, izinhlelo wokubacindezela futhi womoya, amanzi ompompi futhi amacala ophephela.
Expanded PTFE itheyiphu ngokuhlanganyela ekhiqizwa kusuka 100% PTFE, kuba i material inert angasetshenziswa in izicelo eziningi ngokumelene ezindaweni onakalisayo, ngaphandle oncibilikisiwe izinsimbi alikhali futhi fluorine zokucathula. 24B ngeke ukungcolisa abezindaba futhi ingasetshenziswa ukudla namathuluzi izidakamizwa izicelo.
Uhlobo lomkhiqizo: PTFE Expanded
Material: 100% PTFE, soft futhi kuyaqina kakhulu
PH ububanzi: 0-14
Ingcindezi Umkhawulo: 20Mpa (noma 2900 psi; noma 200kgf / cm2)
Ubuningi:. 0.7 ~ 0.8g / cm3 (.. 43 ~ 49.5lbs / cu ft.3)
Matrix Amandla eqine: 30Mpa (4260 psi)
Ukuphumula Creep (ASTM F38): 51%
Sealablity (ASTM F 37a): 0.1 ml / ihora
Okulandelayo: Document Holder
Intambo Yesigcilikisha Seal Ptfe Tape
Colorful Ptfe ukubekwa uphawu Tape
Ptfe Pipe ukubekwa uphawu Tape
Ptfe ukubekwa uphawu Tape
Ptfe Intambo Seal Tape
Silicone Intambo Seal Ptfe Tape
Teflon Tape Ptfe Intambo Seal
Thread ukubekwa uphawu Ptfe Tape
OEM PTFE Egcwele V-Ring
UHMWPE Fender Panel Anti-ukushayisana Plate
Graphite Egcwele PTFE OEM Ring